ကာရံ ရဲ့ ​မောင်​တစ်​​ခေတ်​ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Poetry » ကာရံ ရဲ့ ​မောင်​တစ်​​ခေတ်​	8
ကာရံ ရဲ့ ​မောင်​တစ်​​ခေတ်​
Posted by ကာရံ on May 19, 2015 in Poetry | 8 comments
ကာရံ ရဲ့ ( ​မောင်​တစ်​​ခေတ်​)
​လေခွန်​ကိုအသာထား ရာခိုင်​နှုန်းက၅ ဆိုသတဲ့​မောင်​
ဟိုသွားဒီသွား တစ်​​ထောက်​နား ကားကလည်းကြပ်​​သေးတယ်​​မောင်​
ဟိုကြည့်​ဒီကြည့်​ကျီးမျက်​စိ လုယက်​မှုလည်း ​ပေါသတဲ့​မောင်​
​ခေတ်​ကာလအသာထား အတိုအပျက်​လည်း မိုက်​သတဲ့ ​မောင်​
အမြန်​​လမ်းလား တမလွန်း ထိခိုက်​မှုများသတဲ့​မောင်​
ခုတစ်​မျိုး ​တော်​ကြာတစ်​မျိုး အထက်​ကဆိုးသတဲ့​မောင်​
သူ့​နေရာ ​ပျောက်​မှာဆိုး မိုး​တောင်​ရွာသတဲ့​မောင်​
​မောင်​ ​မောင်​​ ​မောင်​ ​နောင်​အခါ တစ်​မျိုးမ​ခေါ်နဲ့
Facebook ထဲ ​ခေတ်​တစ်​ခဏထ
ဒါကလည်း​ခေတ်​ကာလပါ​မောင်​ ကာရံ ၁၉့ ၅့ ၂၀၁၄
Mike says: .ကဗျာလေးကလည်းဖတ်ကောင်းပါတယ်မောင် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 565
lu lu says: mpt ကို ကျိန်ဆဲရင်း
တွေ့ ရတာလေးးဖတ်သွားပါတယ် မောင်
အောင် မိုးသူ says: အဲသည်မောင်တွေကို ကြည့်မရတော့ဘူး လူတွေ လူတွေ ပေါ်ပင်ဆို လိုက်ပေါ်ပင်ကြတာ ခက်သား။ ပို့စ်လေးကတော့ ဖတ်လို့ကောင်း မောင်…..ဆိုတာကတော့ နည်းနည်းကြည့်မရ ခိခိ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 219
ကာရံ says: ဟုတ်​ပဗျာ အ​တော်​ခက်​တဲ့သူ​တွေ
မြစပဲရိုး says: . မောင် …..
. အများပြောတဲ့ သွေးခွဲစကား တွေ ကို
. မောင် …..
. အသဲထဲ က စွဲမြဲပြီး ယုံရင်
​ဒေါ် လေး says: ပိုင်းလော့ မလေးကို ဝန်းရံကြ
ပုရိသ များက ဆိုသတဲ့ မောင်
ကာရံ says: ဟုတ်​ပါတယ်​ ​မောင်​ ခ်​ခ်​
Alinsett @ Maung Thura says: .တမှောင်ထဲ လိုက်မှောင်ကြတာ… မီးတွေတောင် ပျက်နေပြီ မှောင်…